Ingcambu okanye emhlophe ebizwa ngokuba yi-ginger. Iingcambu zayo zizityebi kwiivithamini A kunye noC, kunye ne-oil-tsingibernen ebalulekileyo. Kwiikhikhishi ezininzi emhlabeni wonke, i-ginger isetyenziselwa ukulungiselela izitya ezahlukeneyo. Wathandwa nguye ngenxa yokuvumba okumnandi kunye nokumnandi, into ekhethekileyo, enika umthunzi okhethekileyo. Kodwa ngaphezu kokungongeza ekutheni, esi sityalo sisetyenziselwa ukwenza itiye.
Itiyi ye-Ginger inomdla ococekileyo kunye nobutyebi. Iyakuthintela kakuhle imetabolism, ikhuthaze ukususwa kweetekisi. Oku kukuvumela ukuba ulungelelanise umsebenzi womzimba, kunye nokuncedwa nokulahlekelwa ubunzima.
I-Ginger inceda ukuphucula ukugaya, ukuqinisa imemori, ukwandisa ukondla nokuqinisa ukusetyenziswa kwesondo. Inceda ukukhupha iigesi emathunjini, ichithe i-mucus enobungozi, eqokelela kwiindonga zesisu nezinye izitho zokugaya. I-Ginger iphinda iphumelele ekhatheni izifo zesibindi.
Ukudla rhoqo kwinqayi ye-ginger kunceda ukubonelela ngegazi nge oxygen, leyo leyo inceda ekuphuculeni ukusebenza kwengqondo. Oku kuselayo kususa ngokuphumelelayo intloko kunye neentlungu kwi-sprains kunye nemivimbo engemuva, kunceda ukuphucula imeko yeenwele kunye nekhumba.
Itiyi ye-Ginger ibonisa iziphumo ezilungileyo ekunyangeni izifo ezininzi. Impembelelo ephawulekayo inokuphunyezwa ngokuphuza rhoqo le sesiselo ngenjongo yokulahlekelwa isisindo. Ngethuba elifanayo lokulungiselela, ungasebenzisa izithako ezongezelelweyo: izityalo ezahlukeneyo, inja ephakamileyo okanye i-lemon.
Ukutshatyalaliswa kwento ye-ginger
Itiyi ye-Ginger ayinakuphikiswa kwaye iya kuba luncedo kumntu wonke. Nangona kunjalo, kukho imingcipheko yokusetyenziswa kwayo. Ngokomzekelo, ngezifo zesikhumba ezivuthayo, ukutyiwa kwe-ginger tea kunokunyusa iinkqubo zokuvuvukala.
Akukhuthazwa ukusebenzisa le teyi kwindawo yokushisa ephakamileyo, njengoko ikhuthaza ukujikeleza kwegazi, oku kungakhokelela ekudakaleni kwentlalo yesigulane. Kwakhona, kukufanelekile ukuyeka itiye ye-ginger kunye ne-aggravation yezilonda kunye nokuphuma kwegazi. I-tea ye-Ginger iyakha amandla, ngoko ungayisebenzisi ubusuku.
Ukupheka kwiitayi ze-ginger
I-recipe elula yokwenza itiye ye-ginger yile ndelayo - i-root cm ye-ginger i-2-3 cm igalelwe i-lobules kwaye iphungulwe kwi-thermos. Itale inxila kumhla ngaphambi okanye emva kokutya isiqingatha seglasi. Ukufakelwa, ungongeza i-lemon, ujonge okanye nayiphi isiraphu.
Iresiphi yesibini ibandakanya ukulungiselela isiselo kunye nexinki ephezulu. Ukwenza oku, i-ginger ecocekileyo kufuneka ichithwe ngamanzi kwaye ibiliswe imizuzu eyi-15 phezu kobushushu obuphantsi. Emva kokuba umhluzi sele ucolile ukuya kuma-degrees angu-37, kufuneka udibanise ijusi kunye nobusi. Baphuza itiye njengesiqhelo.
Kukho umyalelo oza kusebenza ngokutya kokutya kwesisindo. Ukwenza itiye kule recipe, thabatha inxalenye enye ye-ginger entsha okanye omisiwe kunye negalikhi kunye neengxenye ezingamashumi amabini zamanzi abilayo. Konke oku kufakwa kwibhodlela ye-thermos kwaye kuqhutywe imitha engamashumi amabini. Itale inxila kwiincinci ezincinci kulo lonke usuku.
Unokwenza itiye ye-ginger ngefuthe ledayuretic. Oku kuya kuba negalelo nje ekulahlekelweni kwesisindo, kodwa kwakhona ekususweni kweetekisi. Ukuze ulungiselelwe itiye, ngaphezu kwe-ginger, kufuneka udibanise i-senna encinci okanye i-crust bark.
Abo bathanda i-spicy kwaye banesisu esomeleleyo banokwenza itiye eya kunceda ukulahla ubunzima obuninzi ngokukhawuleza kunye nokwandisa imetabolism. Ukwenza oku, faka i-pepper encinane kunye ne-sinamoni kwi-tea ye-ginger. Into ephambili kule recipe ayiyikuyidlulela ukwenzela ukuba ukusetyenziswa kwee teyi kungakhokeli kwimiphumo engadingekile. Itiyi ye-Ginger ngokwayo yindlela enamandla kakhulu neyisebenzayo yokulahlekelwa isisindo. Ngoko ke, kufuneka utyiswe ngokudibanisa nokutya okufanelekileyo, kwaye ungathathi ukuzithoba.
Itiyi ye-Ginger ingasetyenziselwa njengesiseko sokulungiselela iifayili zezokwelapha, ukongeza imifuno efunekayo. I-Ginger ingabhalwa ngamaqabunga ama-rose, i-black and green tea, ama-berries ahlukeneyo kunye neziqhamo.
Iipropathi zokwelapha zeziqhamo nemifuno
Isidlo sinconywe nge-cholecystitis
Iipropati ezisebenzayo zepereji kunye ne-apricot
Burito ukuze sidle
Indlela yokujonga umntwana osebenzisa iziyobisi
Yiyiphi intsholongwane, ukubonakaliswa kokungabikho komzimba
Iimpawu ezikhanyayo entwasahlobo-ehlobo ka-2014: yiyona nto ihamba phambili kakhulu!
Indlela yokulwa nokudandatheka kunye neendlela eziliqela zokuqinisa iingxaki
Umlilo kunye nendawo yangaphakathi yekhaya lakho
Isitayela somntu ngaphakathi
Cocktail nge-cranberry kunye ne-limoncello
Ukutya kweSofia Rotaru
I-horoscope ye-Personal for Gemini ngo-2010